दुखी प्रेम हरेक मानव हृदयको अतिथि हो जुन, सिद्धान्तमा प्रेम गर्न सक्षम छ। र यद्यपि उनले सयौं वर्षको लागि कला, अमर कार्य, आदिका महान कामहरूका लागि प्रेरित गरे, अपरिचित प्रेमसँग भेट्न, पीडा र कडा दुखाइको सम्भावना, छिट्टै वा पछि हामी प्रश्नमा आउँछौं - कसरी यो दुखी प्रेम जीवित रहन्छ, बिर्सनु, छुटकारा पाउनुहोस् मन सदाको लागि।
यो प्रश्न सोध्नु अघि, आफूलाई आफैलाई जवाफ दिनुहोस्, केवल इमान्दारीपूर्वक - तर तपाईं साँच्चै असीमित प्रेमबाट अधिक पीडा गर्न चाहनुहुन्छ। यो अलि अजीब लाग्दछ, तर प्रायः मनोवैज्ञानिकहरूले दुखी र अपरिचित मायाको अनुभवमा माचोकवादको सङ्केत गर्छन्। पहिलो, हामी दयाको स्थितिमा प्रयोग गर्दैछौं: अरू र आफैलाई। दुखी प्रेमको समस्या यो हो कि एक व्यक्ति उनको मा निर्भर हुन्छ। र, यसको अतिरिक्त, तिनलाई दुखाइ आवश्यक छ, विशेष औषधिको खुट्टाको रूपमा। त्यसोभए, उदाहरणका लागि, पहिलो प्रेम, जुन, नियमको रूपमा, दुखी (वा अपरिचित) हुन्छ, लगानीका भावनाहरूको कारणले हामीलाई लामो समयको लागि सम्झिएको छ। निश्चित रूपमा तपाईंले आगोमा तेल थप्नुभयो, उचित गीतहरू, विचारहरूसँग पीडित सनसनीहरू तीव्र बनाउन र शुद्ध ढंगले आफैलाई आँसुमा ल्याउन। परिचित? त्यसोभए, पीडा - यो प्रेम हो?
यसको बारेमा, कुन प्रेम हो, एक भन्दा बढी शताब्दीका लागि दार्शनिकहरू, कविहरू र मनोवैज्ञानिकहरू बहकाउन र प्रतिबिम्बित गर्छन्। सबै भन्दा सहमत हुनुहुन्छ कि साँचो प्रेमले आनन्द र आत्म-क्षमताको भावना ल्याउनुपर्दछ। यदि भावनाले निर्भरतामा विकास गर्छ, अपमान र मासुको धक्का धकेल्छ, त्यसो गर्दा यसले प्रेमको धेरै स्वभावलाई बनाउँछ - सिर्जना गर्न। तपाईंले आफ्नो जीवन, तपाईंको अवसर, आनन्दको अधिकार गुमाउनु भयो। र यदि तपाईं स्थिति परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो पीडाको श्रृंखलामा पहिलो दायाँ कदम हो।
त्यसोभए, यदि तपाई अचम्मको प्रेम अतीतमा रहन चाहनुहुन्छ भने के गरौं।
कसरी दुखी प्रेमबाट छुटकारा पाउनु हुन्छ?
उदासीन प्रेमको रूपमा नराम्रो प्रेम देख्न महत्त्वपूर्ण छ, तर रोगको रूपमा। यस्तो दृष्टिकोणले हामीलाई कम्तिमा सामान्य ज्ञानको भाग समावेश गर्न अनुमति दिन्छ:
यदि रकम अनुमति दिइन्छ, एक मनोवैज्ञानिक संग एक परामर्श मा जानुहोस्। विशेषज्ञले केहि प्रविधिहरू उठाउन मद्दत पुर्याउँदछन् जुन तपाईंको जोडीले अवस्थित हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई स्वीकार्दछ;
विशेष उद्देश्यले क्षमाको उद्देश्य राख्दछ। मानसिक रूपमा एक मायालु कल्पना कल्पना गर्नुहोस्, क्षमाको लागि उहाँलाई सोध्नुहोस्, उसलाई खुशी चाहियो, उसलाई छोड्नुहोस्;
अर्को व्यक्तिको प्रेमलाई ध्यान दिनुहोस्, अर्थात् आफैलाई। आफैलाई प्रेमको साथमा सबै कुरा गर्नुहोस्, आफैलाई तपाईंको उत्कृष्ट गुणहरू पत्ता लगाउन। म्यानुअल रूपमा आफैलाई गफ गर्न र तपाईंको प्रेम स्वीकार। आन्तरिक बच्चालाई व्याख्या गर्नुहोस् जुन तपाईंले कहिल्यै छोड्नुहुन्न।
कहिलेकाहीँ, कसरी दुखी प्रेम बिर्सनुको बारेमा सोच्नुहोस्, हामी जीवनका सबै रिमाइन्डरहरू फेंकने कुनै पनि विचारलाई त्याग्छौं। तर यो तार्किक छ। टाढाको संयुक्त तस्बिरहरू र ती चीजहरू लुकाउनुहोस् जुन तपाईंको प्रियको सम्झाउनुहुन्छ;
उदास विचारहरूको लागि आफ्नो टाउकोमा कोठा छोड्नुहोस्। यो अचम्म छ कि हामी आफैलाई पोषण गर्न कति ऊर्जा खर्च गर्छौं दुखी प्रेम। आखिर, यो भाव बिना कारण होइन आगोको तुलनामा गर्मीको लागि लगहरू आवश्यक पर्दछ। केवल राम्रो अनुभवहरूको सट्टा, तपाईंले अनुभवको साथ आफ्नो प्रेमलाई खुवाउनु हुन्छ। के यो दु: खी प्रेमबाट छुटकारा पाउन निर्णय गर्ने यो समय बर्बाद गर्न यो लायक छ? होइन!
शौकहरूको संसार पत्ता लगाउनुहोस्, रोचक किताबहरू, विदेशी भाषाहरू, नृत्यहरू, यात्रा - तपाईंले कस्तो आनन्द ल्याउनुहुन्छ, पीडा नगर्नुस्।
र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, संसारको लागि खुला रहनुहोस्। अन्यथा, तपाईं आफ्नो जिन्दगीमा मुख्य स्थान कब्जा गर्ने योग्य हुनुहुन्छ भनेर देख्न जोखिम छैन!
मानिसलाई कसरी उत्प्रेरित गर्छ?
पुरुषहरु को बारे मा महिलाहरु को बारे मा के गर्दछ?
सम्बन्ध कसरी सुरक्षित गर्ने?
चेरी जाम चेरी पट्टको साथ
प्रारम्भिक अवस्थाहरूमा मोतिथिको लक्षण
"ग्रीन साबुन" कात्तिक - निर्देशन विरुद्ध
बाल चिकित्सा आर्थोपेडिक तकिया - खरीद गर्नु अघि उपयोगी सल्लाह
फ्राइङ प्यानमा कसरी त्रसुर आलु को लागी?
अनुहारमा क्रीम लागू गर्ने?
बच्चामा उठाइएका हेमोग्लोबिन
टाइट्सको लागि लामो स्वेटर
भ्वाईस हानि - कारणहरू र उपचार
अनुहारमा सेतो हेराइ - कारणहरू
महिलाको शरद ऋतु तल जैकेट
रेग्मी शर्ट्स 2013
कुर्सियों को लागि तकिया
आफ्नै हातको साथ Vyshyvanka
अनुहारको लागि फ्रिस्टवर्क
महिलाको स्टोर्स डलोस गबबाना
एलिजाबेथ ओल्सन एक स्विडिश मा
बच्चाहरु को लागि गतिशील जिमनास्टिक